Oscar Pistorius to appeal to South Africa's highest court | Daily Mail Online
Published: 11:21 EDT, 8 December 2015 | Updated: 12:19 EDT, 8 February 2016
Oscar Pistorius covers his face in the dock at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)
Oscar Pistorius sits in the dock in a courtroom at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)
Chief state prosecutor Gerrie Nel sits in a courtroom where Oscar Pistorius appears in the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius, left, talks with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)
Oscar Pistorius sits in the dock at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)
Oscar Pistorius, center, consults with his defense team in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius, right, confers with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius arrives at the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday, Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in a South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Themba Hadebe)
Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux, center, in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius consults with legal team members in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius arrives at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)
Oscar Pistorius arrives at a courtroom of North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)